Semalt: 6 Kushandura Zvigadzirwa zveWebhu Kuti Uwane Data Usina Kodhadha
Kubva paIndaneti yakatanga kukura maererano nehuwandu hwemashoko uye hukuru, mabhizinesi eIndaneti, vatsvakurudzi, vanofarira deta uye vashanduri vakatanga kutarisa zvigadziro zvekubudisa dhiyabhorosi kubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana uye zviduku. Kunyangwe iwe uchida kubvisa tsvaga kubva pakutanga kana kuva neongororo-based project, idzi web scraping mathuluzi achawana ruzivo kwauri pasina coding.
1. Kutadza Hub:
Kuva mukurumbira weFoodfox unozivikanwa, Outwit Hub inogona kubudiswa uye kuwirirana ne browser yako Firefox. Icho chinowedzera simba cheFoodfox chakasvika nehuwandu hwekutsvaga webhu - imagens gratuitas para blog. Kunze kwebhokisi, ine zvimwe zvekucherechedza pfungwa dzezvinhu zvinozoita kuti basa rako riite nekukurumidza uye nyore nyore. Kubvisa ruzivo kubva kune nzvimbo dzakasiyana-siyana neExpwit Hub hazvirevi unyanzvi hwekugadzira, uye ndizvo zvinoita kuti chigadzirwa ichi chisarudze vanhu vasiri mapurogiramu uye vanhu vasiri teknolojia. Izvo hazvina mari uye inoshandisa zvakanaka zvayo zvaunogona kuita kuti uwane zvinyorwa zvako, pasina kukanganisa pahutano.
Ndiyo yepamusoro yekutsvaga webhusaiti kuti iwane data pasina coding. Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti Web Scraper ndiyo imwe nzira yeItwit Hub program. Inongowanikwa chete kune vashandisi veGoogle Chrome uye inotitumira kuisa mapepa ekuti nzvimbo dzedu dzinofanira kufamba sei. Uyezve, iyo ichaparadzira mapeji akasiyana-siyana, uye zviwanikwa zvinowanikwa nenzira yefaira re CSV.
Spinn3r isarudzo yakanakisisa yevadzidzisi uye vasiri mapurogiramu.Iyo inogona kukonzera bhodhi rose, webhusaiti yepaji, nhau dzezvemagariro evanhu uye RSS feeds yevashandisi vayo Spinn3r inoshandisa Firehose APIs iyo kutora 95% ye indexing uye web webpower work.Kuwedzerwa, chirongwa ichi chinotibvumira kufungidzira kunze kwemashoko tichishandisa mazwi anokosha, ayo achanyima zvisizvo zvisina zvazvinobatsira panguva.
Fminer imwe yezvakanakisisa, zviri nyore uye yakashandiswa-yakagadzirwa web web scraping software paIndaneti.Inobatanidza zvakanakisisa zvenyika uye inonyanya kuzivikanwa nedhidhibhodhi yayo inoona, uko iwe unogona kuona iyo yakabviswa deta isati yaponeswa pane yako Dhiyabhorosi Dhekuro Kana iwe uchida kungotsvaga deta yako kana kuti mamwe webhupu ekugadzira mapurogiramu, Fminer inobata mabasa ose
Dexi.io ane mukurumbira web-based scraper uye data application.Haikudi iwe kuti utore software sezvo uchigona kuita mabasa ako paIndaneti. Icho chiri chekushandiswa-browser-based software iyo inotitendera kuchengetedza ruzivo rwakatsvaga zvakananga kuGoogle Drive uye Box.net mapurisa. Uyezve, inogona kutengesa mafaira ako ku CSV neJSON mafomu uye inotsigira kudhinda kwekusaziva zvisingazivikanwe nekuda kweproxy server.